६ वैशाख २०७६ शुक्रबार Friday, April 19, 2019
प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका दुई केन्द्रीय सदस्यसहित एक जिल्ला जनसरकार प्रमुखलाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रदेश लावारिस र कमजोर बनाउने चाल छ : दाहाल
लाखौं रुपैयाँ ठगी र करणी अभियोगमा प्रहरीले जलजला अनलाइनका सञ्चालक सागर ओलीलाई पक्राउ गरेको छ । ओलीलाई बिहीबार काठमाडौंको सिभिल मलबाट पक्राउ गरी शुक्रबार दाङ ल्याइएको छ । जिल्लाका विभिन्न महिलालाई ठगी र करणी गरेको ओलीलाई अभियोग लागेको छ ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको एथलेटिक्सको दोस्रो दिन शुक्रबार ६ स्वर्ण पदकको छिनोफानो हुँदा आर्मीले वर्चस्व जमाएको छ । बेलझुण्डीस्थित नवनिर्मित एथलेटिक्सको ट्रयाक एन्ड फिल्डमा आर्मीका खेलाडीले ५ स्वर्ण पदक जितेका छन् । एक अर्को स्वर्ण पुलिसकी चन्द्रकला लामगादेले राष्ट्रिय कीर्तिमानका साथ जितेकी छन् ।
शुक्रबार अपराह्न हावाहुरीसँगै परेको पानीका कारण ललितपुरको झम्सीखेलस्थित हसपोसा गणेश मन्दिर भित्रको रुख ढलेको छ । रुखले अगाडिपट्टी रहेको मन्दिरकै पर्खाल भत्काएको छ । रुखले मानवीय क्षति नभएको र एउटा स्कुटरमा सामान्य क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बालुवाटारमा आठ आना जग्गा सम्बन्धित कार्यालयले प्रचलित कानुनअनुसार किन्न मिल्ने एकिन गरेकाले खरिद गरेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र थप छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनले छानबिनबाट आएका निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब आएपछि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा सरकारले 'पर्ख र हेर' को नीति लिएको छ । राष्ट्रसंघका स्पेसल र्‍यापोर्टर (विशेष दूत) हरूले सत्य निरुपण तथा मेलपिमलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पुनर्गठन हुन लागेका बेला देखाएको चासो र खबरदारीपछि सरकार आफू अनुकूलका मानिस नियुक्त गर्न पछि हटेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को खालको अराजकता र निरंकुशतातिर देश जाने हो कि भन्ने चिन्ता परेको बताएका छन् ।
चन्द समूहका नेता भुजेललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता सूर्य भुजेललाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको हो । भूजेललाई महानगरीय अपराध महाशाखाले ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल टावर लक्षित बम विस्फोट गराएको आरोपमा घटनाको तीन दिनपछि कलंकीबाट पक्राउ गरेको थियो ।
ताप्लेजुङमा छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । खोलामा माछा मार्ने क्रममा डुबेर सिरिजंघा गाउँपालिका ३ सिकैंचा कुञ्जारिका २१ वर्षीय अजय बोखिमको मृत्यु भएको छ ।
दिनहुँ औषत १० वटा वंशजको नागरिकता । फाटफुट अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र । पाँच/सात प्रतिलिपि । सम्पूर्ण कागजातसहित आएका सेवाग्राहीलाई बढीमा आधी घण्टाभित्र नागरिकता वितरण । सीमावर्ती मोरंङको रंगेली नगरपालिकास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयको दृश्य हो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा चाँडै परियोजना बैंक बनाउने बताएका छन् । बिहीबार प्रदेश योजना आयोगले आयोजना गरेको ‘प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधार पत्र निर्माण’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले परियोजना बैंकको काम तत्काल सुरु गरिने बताए ।
बिनाप्राविधिक सर्वेक्षण र गुणस्तरहीन सडक निर्माणले ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधाभन्दा समस्या हुने गरेको छ । लामो समयदेखि जिल्लाको समग्र विकासमध्ये सवै निकायबाट सडक निर्माण प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर जति सडक खनिए पनि स्थानीयबासीले अहिलेसम्म एम्बुलेन्स सेवा समेत घर दैलोबाट पाउन सकेका छैनन् ।
सधैंको वर्षझैं यसपालि पनि बिर्तामोड ५ को निचाझोडा जंगलमा भेला भए धिमाल । बालबच्चादेखि पाका दिनभर दन्कावाराङ पूजामा रमाए । प्रकृति पूजक यिनीहरू हिन्दु धर्ममा जस्तै शिव मान्छन् । शिवलाई धिमाल भाषामा दान्कावाराङ भन्छन् ।
प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट तीन दर्जनभन्दा बढी अवैध हतियार संकलन गरेको छ । एकैदिन १० थानसम्म भरुवा बन्दुक संकलन भएका छन् । बिहीबार पनि प्रहरी टोली गाउँमै छ । यसअघि ११ थान बन्दुक संकलन गरिएको थियो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले हुरीबाट मृत्यु भएका १० जनाको परिवारलाई शुक्रबार ३/३ लाख नगद हस्तान्तरण गरेका छन् ।
वीरगन्ज चिनी मिल आवास क्षेत्रबाट बिहीबार मध्याह्न बाजागाजासहित जन्ती निस्कियो । जन्ते महिला तथा पुरुष नाच्दै पावरहाउसस्थित शिख समुदायको नयाँ गुरुद्वारा प्रवेशद्वार पुगे । त्यहाँ बधु पक्षले बर पक्षको न्यायो स्वागत गर्छन् ।
वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चैत महिनामा मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । यस महिना ३ अर्ब २४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र अर्थात् २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
चन्द्रपुर २ गैंडाटारका १५ वर्षीय सुकमान गोलेलाई कराँते सिक्ने ठूलो रहर थियो । केही दिनअघि चन्द्रनिगाहपुरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगिता हेर्न उनी दिनहुँ पुगे । यसले पनि उनलाई थप ऊर्जा मिल्यो, कराँतेको मोहमा ।
वीरगन्ज नाकाबाट राँगा तथा बाख्राको अर्धप्रशोधित छालाको निकासी घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा चालु वर्ष सोही अवधिमा यी वस्तुको निकासीमा ह्रास आएको हो ।
मनग्य गहुँ भित्र्याउने सपनासाथ एक बिघा बटैयामा लिई गहुँ लगाएकी बर्दिवास १४ की शिवकुमारी महतोलाई पाकेको बाली थन्क्याउन नपाउँदा चिन्ता परेको छ । गहुँ पाकेर गेडा खेतमै झर्न थालिसक्दा पनि हावाहुरी, असिना र पानीले भित्र्याउन नदिएपछि शिवकुमारीजस्तै महोत्तरीका धेरै किसान चिन्तित भएका छन् ।
एकल प्रयासमा बनेको भनी चर्चामा आएको नमुना बस्ती हाल सुनसान छ । भूकम्पले बस्ती जोखिममा परेकाहरूलाई त्यहाँ राखिएको थियो । अहिले उनीहरू धमाधम नमुना बस्ती छाडिरहेका छन् ।
कालो बादल, चट्याङको ठूलो आवाजसँगै एक्कासि असिना पानी दर्कियो । ‘छम्’ अर्थात् ध्यानपूजामा व्यस्त लिस्तीकोट पाउँ गुम्बाबासीमा एकै पटक भागभाग मच्चियो । बस्तीको माथिल्लो नोकाङ डाँडाको छेउको माटो झर्न थालेपछि भोटेकोसी गाउँपालिका–१ लिस्तीकोट पाउँगुम्बाका कामी शेर्पा आत्तिँदै निर्माणाधीन घरको माथिल्लो तल्लामा उक्लिए ।
पुँजीगत खर्च नभएकोमा सांसदको चिन्ता
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च नभएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी दलका सांसदहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्य आइसक्दा पनि उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
छोराछोरी स्कुल भर्ना नगर्ने अभिभावकलाई राक्सिराङ गाउँपालिकाले सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विपन्नताका कारण पढ्न नपाएकाहरूलाई विद्यालय पोसाकसहितका सामग्री उपलब्ध गराएर निःशुल्क पढाउने बैठकको निर्णय छ ।
पाँच नेपालीसहित १४ जनाले जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो पाल्दोर हिमाल सफल आरोहण गरेका छन् । जिल्लाको पर्यटन विकासका लागि भन्दै ७ जना कोरियन, २ जना मंगोलियन र ५ जना नेपालीले गणेश हिमाल छेउमा रहेको पाल्दोर (पाविल) हिमाल आरोहण गरेका हुन् । उक्त हिमालको उचाई ५ हजार ९ सय ३ मिटर छ ।
त्रिभुवन राजपथका दुई स्थानमा अज्ञात व्यक्तिहरुले गएराति दुईवटा गाडीमा आगजनी गरेका छन् । मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका—९ गोलमोडमा हेटौंडाबाट पालुङतर्फ जाँदै गरेको ना ४ ख ७९६० नम्बरको मिनि ट्रकलाई बुधबार राति रोकेर पाँचजनाको समूहले पेट्रोल छर्किएर आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवापनपुरका प्रहरी फ्रवक्ता सागर बित्रम राणाले बताए ।
थातथलोमा देखिए दुरा
चिम्से आँखा, बाटुलो अनुहार, थेप्चे नाक । तन्नेरी जसरी कानले सुन्न र आँखाले देख्ने भेउ पाउन छाडिसके पनि ९३ वर्षीया सोमा दुराको बोली अझै टाठै छ । मध्यनेपाल–१० नेटा हाँडीखोलाबाट २ घण्टा लगाएर सुन्दरबजार–११ तुर्लुङ गाउँ चढेकी उनी दुरा भाषा बोल्नेमध्ये औंलामा गन्न सकिने थोरैमा पर्छिन् ।
दरबन्दी छ, प्रहरी छैनन्
सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील स्थान भए पनि ढोरपाटनस्थित सिकार आरक्षको चौकीमा अहिले सात जनामात्रै प्रहरी छन् । दैनिक हुने घटना, चौकीको सुरक्षा र बिदामा जान पाउने सुविधा प्रयोग गर्दा नियमित खटिने ५ जना मात्र हुन्छन् । यो समस्या जिल्लाका ग्रामीण चौकीहरूमा जतासुकै छ ।
अघि बढेन आँधीखोला पुल निर्माण
सम्झौताअनुसार चार वर्षअघि नै पुल हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । सिरुबारी होमस्टे गाउँ पुग्ने मार्गको आँधीखोलामाथिको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । पाँच वर्षअघि निर्माण सुरु भएको पुलको काम रोकिएको तीन वर्ष भइसक्यो ।
पर्यटक बोलाउँदै धार्चे
पाहुना बोलाउन उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाले पूर्वाधारको विकास योजनासँगै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारका योजना अघि बढाएको छ । दुईवटा पदमार्गको विकाससँगै भाषा, कला संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई प्रचार गरेर पर्यटक आकर्षित गर्न वृत्तचित्र निर्माण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बताए ।
गडहरे गुफामा भीड
घुमन्ते फाट्टफुट्ट मात्रै पुग्ने गरेको भीरकोट–८ ओकादीको गडहरे गुफामा आइतबार एकैदिनमा ७ सय जनाभन्दा बढी पुगेका छन् । नयाँ वर्षको अवसर पारेर भीरकोट नगरपालिकाले गुफा उद्घाटन गर्दै अवलोकनका लागि खुला भएको घोषणा गरेको हो ।
नमुना सहरमा असारदेखि बिजुली
नमुना सहरमा सूचीकृत भएर तीन वर्षदेखि काम सुरु भएको बुर्तिबाङमा चालु वर्ष बिजुली पुर्‍याउने तयारी भएको छ । वर्षौंदेखि लघुजलविद्युत्को भरमा रहेको बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका र बडिगाड गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन काम सुरु भएको हो ।
शीतगंगा नगरपालिका–१४ स्थित वाणगंगा खोलामा निर्माण हुन लागेको ८२ लाख रुपैयाँ लगानीको पावरटार सिँचाइ आयोजनाको बाँध अघिल्लो भदौमा आएको बाढीले बगायो । पावर गाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन कुलो निर्माण गर्न लागिएको थियो ।
पश्चिम नवलपरासीका कच्ची सडकलाई ढलान गर्न थालिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रको सडकमा कालोपत्रेको सट्टा पक्की ढलान (आरसीसी) गर्न थालिएको हो ।
गेरुवा गाउँपालिकाका प्राविधिक र कर्मचारीको मिलेमतोमा निक कम्पनीले मात्र पाउने प्रावधानसहितको विद्युतीय ट्रान्सफर्मर ठेक्का टेण्डर आहवान गरिएको खुलेको छ । गत चैत २६ गते गेरुवा गाउँपालिकाले ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने टेण्डर आहान गरेको थियो ।
यहाँस्थित एक सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क बस सञ्चालनको तयारी गरेको छ । सिस्ने गाउँपालिका–५ स्थित रुक्मिणी माविले यसै शैक्षिक सत्रदेखि बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । टाढाका विद्यार्थीलाई विद्यालय आउजाउ गर्न समस्या परेपछि बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकको बुटवल शाखालाई प्रबन्धक कल्पना ढकालले डेढ वर्षदेखि नेतृत्व दिइरहेकी छन् । ०६२ सालदेखि बैंकिङ पेसामा आबद्ध उनको अनुभवमा बैंकको व्यवस्थापन पद महिलाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, साहस, लगनशीलता र इमानदारीले भने नेतृत्वका लागि सफलता प्रदान गर्ने उनको अनुभव छ ।
राप्रपा जुम्लाका १२ नेता प्रहरी नियन्त्रणमा
धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राप्रपा जुम्लाका १२ जना नेतालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको छ । प्रहरीले राप्रपा केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर थापा, जिल्ला कार्य समिति जुम्लाका सचिव श्रीकृष्ण बुढा र जुम्लाका प्रवक्ता अंगद प्रसाद देवकोटा लगायतका नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
कर्मचारी सरुवाले कार्यक्रम अन्योलमा
समायोजनका त्रममा डिभिजन वनका अधिकृतसहित ११ कर्मचारीको सरुवाले कार्यक्रम सञ्चालनमै अन्योल भएको छ । कर्मचारी सरुवाले सुरु हुन थालेका कार्यक्रम केही समय प्रभावित हुने देखिएको हो ।
असिनाले स्याउमा क्षति
छायाँनाथरारा नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीका स्याउ बारीमा असिनापानीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । दाना लाग्दै गरेका स्याउका फूल असिनाले झारेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । ताल्ता, मइतु, कालापाल्ता, माथितुम, पिना, झ्यारी, बामलगायत गाउँमा असिनाले ठूलो क्षति गरेको हो ।
जलवायुमैत्री सिँचाइ योजना
बाँफिकोट गाउँपालिका ८, दुलीका विभिन्न टोलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन जलवायुमैत्री योजना निर्माण थालिएको छ । धारापानी–तुरीधारा–किलिमिट्या–पोखरा सिँचाइ योजनामार्फत साढे १९ सय रोपनीमा सिँचाइ पुर्‍याउन लागिएको हो ।
स्वयंसेवक शिक्षकलाई अवकाश
आठबीसकोट नगरपालिकाले ८ करार नियुक्त स्वयंसेवक शिक्षकलाई सेवाबाट हटाएको छ । गत चैत २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले दुई शिक्षक र ६ शिक्षिकाको म्याद नथपेर बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
असिनापीडितलाई एक महिनाको तलब
ठाँटिकाध गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले असिनापीडितलाई एक महिनाको तलब राहतस्वरुप प्रदान गर्ने भएका छन् । गत शुक्रबार परेको असिनापानीले स्थानीयको अन्नबाली सखाप पारेपछि एक महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरिएको हो ।
चार भाइ छोराबुहारी छुट्टिएर जाँदा वृद्ध दम्पती समरा राना र बिलन्दा देवीको हातमा एकसुको थिएन । आफनै नाममा रहेको साढे ४ बिघा पनि ४ भाइले बाडेर लिए । बाचुन्जेल खान वृद्ध दम्पतीलाई घर वरिपरीको ६ कट्टा दिएर छोराबुहारी अलग बसे ।
रामारोशन, मेल्लेख गाउँपालिका तथा पञ्चदेवल विनायक र कमलबजार नगरपालिकाका विभिन्न स्थान चट्याङको अत्यधिक जोखिम क्षेत्र मानिन्छ । जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले जिल्ला अन्य क्षेत्रभन्दा यी सबैभन्दा बढी चट्याङबाट क्षति भएका स्थान भनी पहिचान गरेको छ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाह्रसिंगा र नीलगाईको गणना सुरु भएको छ । २४औं वन्यजन्तु सप्ताहको आरम्भसँगै आइतबार बाह्रसिंगा र नीलगाईको गणना थालिएको हो । बाह्रसिंगा र नीलगाई बाघका मुख्य आहारा हुन् ।
जिल्लाकै प्रशिद्ध मेलाको रुपमा रहेको चैतलीको मेलास्थलबाट प्रहरीले विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको छ । छविसपाथीभेरा गाउँपालिका-३ बान्नीचउर नजिकैको जंगलबाट नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले छोडेको विस्फोटक पदार्थ प्रहरीले बरामद गरेको हो ।
कक्षा ८ मा पढ्ने तेज ढोली १४ वर्षका भए । गत शनिबार उनी बिछट्टै खुसी देखिन्थे । ४ दिनको कडा मिहिनेतपछि रामेछापका रामजी परियारको सहयोगबाट उनी सहनाई बजाउन सफल भएकोमा प्रफुल्ल थिए ।
भारतको लुधियानाबाट चोरेर ल्याएको रकम प्रहरीले बरामद गरेको छ । क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको संयुक्त गस्ती टोलीले मंगलबार डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका २ तिखात्तरबाट ४ लाख ३१ हजार भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको हो ।
अष्ट्रेलियाले आफ्नो अध्यागमन तथा भिषा नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । परिवर्ततित नियममा मुख्य गरेर स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र (पीआर) लिनका लागि लागु गरिएको ‘पोइन्ट’ अंक सिस्टममा ठुलो फेरबदल गरिएको छ ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको एथलेटिक्सको दोस्रो दिन शुक्रबार ६ स्वर्ण पदकको छिनोफानो हुँदा आर्मीले वर्चस्व जमाएको छ ।बेलझुण्डीस्थित नवनिर्मित एथलेटिक्सको ट्रयाक एन्ड फिल्डमा आर्मीका खेलाडीले ५ स्वर्ण पदक जितेका छन् । एक अर्को स्वर्ण पुलिसकी चन्द्रकला लामगादेले राष्ट्रिय कीर्तिमानका साथ जितेकी छन् ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार बिहान भएको महिला फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ । घोराहीको भरतपुर मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश ५ लाई शुन्यकाबिरुद्ध ६ गोल गर्दै पुलिस क्लब विजयी भएको हो ।
इंग्लिस प्रिमिय लिग क्लब चेल्सी र आर्सनलले बिहीबार राति युरोपा लिगको सेमिफाइनल यात्रा तय गरेका छन् । चेल्सीले अन्तिम आठको दोस्रो लेगमा स्लाभिया प्रागलाई ४-३ ले हरायो ।
नेपाली युवा टिम एएफसी यू–१९ वुमेन्स च्याम्पियनसिप २०१९ मा छनोट हुने लक्ष्यसहित अन्तिम तयारीका लागि बुधबार चीन प्रस्थान गरेको छ । छेन्दुमा दुई अभ्यास खेलसँगै एक साताको तयारीपछि दोस्रो चरणको छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली टिम म्यान्मारको मन्डला पुग्नेछ ।
पहेँलो जर्सी । त्यसमा चेस्ट नम्बर टाँसिएको छ १०१ अनि खुट्टामा गोल्डस्टारको नीलो जुत्ता । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको एथलेटिक्समा बिहीबार महिला १० हजार मिटर दौडेकी सरस्वती कुँवरको छोटो परिचय हो यो । १० किमि दौड पूरा गर्न रंगशालालाई २५ फन्को मार्नुपर्ने हुन्छ ।
गरिब परिचयपत्रको वितरणको नाममा अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च भए पनि उनीहरूले परिचयपत्र नपाउँदै कार्यक्रम खारेज हुने भएको छ । सरकारले एक महिनाअघि ‘गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५’ जारी गरेपछि २६ जिल्लामा पहिचान गरिएका गरिबले पाएको परिचयपत्र खारेज हुने भएको हो ।
मुलुकभरका सबै गाउँमा पर्यटकीय जागरणको सन्देश फैलाउने उद्देश्य बोकेर आरोही फुर्वा तेन्जिङ शेर्पा 'मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ' अंकित झन्डालाई विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फहराउँदै छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै ओझेलमा परेका पर्यटकीय थलोहरुको खोजी गर्ने देशव्यापी अभियान 'मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ' भिडियो प्रतियोगिता अभियान हो ।
अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले नेपालदेखि बलिउड पुगेर करिअरको शिखर चुमिन् । क्यान्सरसँगको लडाइँ पनि जितिन् । ४८ वर्षीया कोइरालाले जिन्दगीमा धेरै संघर्ष गरेर सफलता हात पारिन् । यस पटकको उनको सफलता केही फरक रह्यो ।
नागको प्रतीकस्वरूप ५४ हात लामो लिंगो ठड्याउँदै सुनागुथिमा बुधबार बालकुमारी जात्रा सुरु भएको छ । लिंगो ठड्याउँदा इन्द्र गुठीयारहरूले बालकुमारी मन्दिर परिसरमा इन्द्र बाजा बजाए । चैत शुक्ल त्रयोदशीदेखि तीन दिन मनाइने जात्रामा बालकुमारीलाई इष्ट देवताका रूपमा पुज्छन् ।
फिल्मले सामाजिक विषयवस्तुको प्रस्तुति मात्र नभई व्यावसायिक सफलता पनि दिनुपर्ने तर्क छ कलाकार हरिवंश आचार्यको । कथाले बोल्ने विषयसँगै मनोरञ्जन र व्यापार पनि फिल्मसित जोडिएर आउने उनको दाबी छ ।
एउटै चित्रमा दक्षिण एसियाली नारीको अवस्थिति चित्रण गर्नुपर्दा कस्तो देखिन्छ होला ? भारतीय चित्रकार हेमन्त पाण्डेयले कोरेका चित्रले सिर्जनात्मक जवाफ दिन्छ । राजधानीको ठमेलस्थित मिथिला यें ग्यालरीमा ३२ भारतीय कलाकारसहित उनको चित्र पनि राखिएको छ । चित्रमा पाँचवटा हात र चारवटा शिर देखिन्छ । दुई खुट्टा उभिएको जमिनमा भने एकातिर आगोको लप्का, अर्कोतिर हरिया पात । मंगलबार दिउँसो पाका चित्रकार गेहेन्द्रमान अमात्य यो चित्र देखेपछि टक्क अडिए ।
धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा उत्रिएका राप्रपा नेपालका डेढ दर्जन कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उत्तर प्रदेशको अमेठी लोकसभा क्षेत्र भारतीय प्रतिष्ठित राजनीतिक घराना गान्धी परिवारको विरासत । सन् १९६७ मा लोकसभा क्षेत्र बने यता भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले एकाधबाहेक यस क्षेत्रबाट नेहरू–गान्धी परिवारका सदस्यलाई नै उठाउँदै आएको छ ।
भुजा पुजारीले जेट एयरवेजको स्थापनादेखि नै ब्यागेज ह्यान्डलिङमा काम गर्दै आएका थिए । एयरवेजले बुधबार साँझ आफ्ना सबै उडान स्थगनको घोषणा गरेपछि उनी अन्योलमा छन् । बुधबार रातभर सुत्न सकेनन् ।
भारतमा जारी १७ औं लोकसभाअन्तर्गत बिहीबार दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरु भएको छ । आज १२ वटा राज्यका ९५ लोकसभा क्षेत्रमा चुनाव हुँदैछ ।
भारतमा जारी १७ औं लोकसभा निर्वाचनको दोस्रो चरणअर्न्तगत दार्जिलिङसहित पश्चिम बंगालका तीन जिल्लामा बिहीबार निर्वाचन हुँदै छ । बंगालको दार्जिलिङ, जलपाइगुडी र रायगन्ज जिल्लामा निर्वाचन हुन लागेको हो पहिलो चरणमा बंगालको आलिपुरद्वार र कोचविहार जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो ।
भारतका विभिन्न राज्यमा आएको भीषण आँधी र चट्याङले बुधबार कम्तीमा ७८ जनाको मृत्यु भएको छ । सबैभन्दा बढी राजस्थान र उत्तर प्रदेश प्रभावित भएका छन् ।
पारिजात स्मृति केन्द्रले बिहीबार यस वर्षका विभिन्न सम्मान घोषणा गरेको छ । केन्द्रले 'पारिजात सिर्जन सम्मान' आनन्ददेव भट्टलाई, 'पारिजात संघर्षशील नारी सम्मान' सरिता डंगोललाई, 'पारिजात कला सम्मान' रामकृष्ण दुवाललाई तथा 'पारिजात बालसाहित्य सम्मान' खगेन्द्र संग्रौलालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरूले पहिलोपटक ‘ब्ल्याक होल’ को तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् । इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप (ईएचटी) परियोजनामा सामेल वैज्ञानिकहरूले विश्वभरका ६ वटा दूरबिनको उपयोग गर्दै यो तस्बिर निकालेका हुन् ।
गुगलले अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेराबाट व्यावसायिक ड्रोन डेलिभरी सेवा सुरु गर्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाको हवाई सुरक्षासम्बन्धी नियमन निकाय सिभिल एभिएसन सेफ्टी अथोरिटी (कासा) ले उडानका लागि अनुमति दिएपछि औपचारिक रूपमा केही महिनाभित्रै कम्पनीले सेवा सुरु गर्ने भएको हो ।
विश्व फाइभजी प्रविधिको तयारीमा रहेका बेला नेपाल भने फोजीमा पाइला सार्दै गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् । उनका अनुसार यहाँका कुनै पनि अपरेटरले राष्ट्रव्यापी रूपमा फोजी सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
हाम्रो जीवनमा प्रविधिको ठूलो प्रभाव छ । त्यसैकारण, फेसबुकजस्ता प्रविधि कम्पनीहरुको जिम्मेवारी पनि व्यापक छ । हरेक दिन हामी कुन भनाई हानीकारक छ, केमा राजनीतिक गन्ध छ र विशिष्टखालको साइबर आक्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गरिरहन्छौं । हाम्रो साइबर समुदायलाई सुरक्षित राख्न यी कामहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । कुनै कम्पनीको निर्णय मात्र यसको लागि पर्याप्त हुन्न ।
फेदीखोला गाउँपालिकाले स्मार्ट कार्ड प्रयोग गरी मेसिनबाट सेनेटरी प्याड निकाल्ने मेसिन सञ्चालनमा ल्याएकाे छ । फेदीखोला-२ मा रहेको सिद्धार्थ माध्यामिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड मेसिन सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए ।
शुक्रबार बिहान । ९ बज्नै लागेको थियो । सानोठिमीस्थित सेनाको ब्यारेक अघिल्तिर एउटा सानो झुण्ड खडा थियो । कसैले कालो चस्माले आँखा ढाकेका । कोही भने सेतो छडी हातमा बोकेर बसको पर्खाइमा । सबैलाई एउटै हतारो थियो- कति बजे रत्नपार्क पुग्ने !
काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार हावाहुरीसँगै भीषण पानी परेको छ । हुरीले राजधानीका केही ठाउँमा रुख ढालेको छ । प्रि मनुसुनका गत वर्षहरुमा भन्दा पानी बढी परेको मौसमविद्हरु बताउँछन् । बिहानैदेखि धुम्मिएको काठमाडौंमा शुक्रबार अपरान्ह पानी पर्दा यस्तो देखियो :
बालाजुको २२ धारामा मेला (तस्बिरहरु)
शुक्रबार चैत्र शुक्ल पुर्णिमाको अवसरमा बिहानैदेखि बालाजु २२ धारामा मेला लागेको छ । हरेक वर्ष जस्तै यसपटकको बालाजु बाइसधारामा मेला भर्नका लागि ठूलो संख्यामा भक्तजनहरुको उपस्थिति रहेको छ ।
भव्य बिस्केट जात्रा [फोटोफिचर]
भारतमा जारी लोकसभा निर्वाचनका कारण नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द हुँदा यात्रु तथा पर्यटकलाई सीमा वारपार गर्न सास्ती भएको छ ।
त्योबेलासम्म सोचिरहनू जबसम्म कुनै सोचाइले तिमीलाई छक्क पार्दैन  । सिपालु लेखकहरू त्यही भन्छन्, त्यो बेलासम्म लेखिरहनू जबसम्म कुनै कथाले तिमीलाई अचम्भित तुल्याउँदैन  । त्यो बेलासम्म ...
गुगल डक्समा सजिलो फिचर
माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल वा स्लाइडमा तयार पारिएको डकुमेन्ट गुगल ड्राइभमा सेयर गर्दा यसको फर्म्याट परिवर्तन हुन्छ, जसले वर्डमा गरेजस्तो सजिलै गुगल डक्समा काम हुन्न  । ...
मत अब सुतेर एक वर्षपछि मात्र उठ्छु  । बीचमा कसैले नबोलाउनू है १’‘एक वर्षसम्म बीचमा उठ्दै नउठ्ने ?’‘अँ त १’‘अनि भोक, तिर्खा, दिसा, पिसाब, दिग्दारी, क्यै ...